Saraakiisha Mujaahidiinta ee shalay lawareegay degmada Galcad oo meel fagaara ah kula hadlay shacabka degmadaasi oo dhibaato ku qabay Maleeshiyaadka qabuuriyiinta. | Halganka Online
Saraakiisha Mujaahidiinta ee shalay lawareegay degmada Galcad oo meel fagaara ah kula hadlay shacabka degmadaasi oo dhibaato ku qabay Maleeshiyaadka qabuuriyiinta.
Ciidamada Mujaahidiinta Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee shalay gelinkii hore la wareegay degmada Galcad iyo Masege waay ayaa soo dhaweyn balaaran kala kumay shacabka deegaanadaasi ku nool.
Saraakiil katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa shalay gelinkii dambe meel fagaara ah kula hadlay shacabka degmada Galcad oo dhibaato ku qabay Maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa.
Kulan balaaran oo Galcad ka dhacay ayay Odayaasha deegaanka iyo saraakiisha isla garteen in mujaahidiinta laga shaqeeyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo gacmo adag lagu qabto kuwa doonaya in ay wiiqaan ku dhaqanka shareecada islaamka.
fagaare ku yaal degmada Galcad ayay Saraakiisha shabaab ka sheegeen in aysan duulaan ku ahayn dadka shacabka balse ay duulaan ku yihiin kuwa shareeca diidka ah, wilaayada Galgduud ayaa lafilayaa in maalmaha soo socda ay maamul u samayso degmada Galcad.
« Talo Ku Socota Amiirka Mujaahidiinta Al-shabaab Afhayeenka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo Fariin u diray Shacabka Muslimiinta ah ee ku nool degmooyin katirsan Wilaayada Galguduud faah faahina ka bixiyay furasha Mujaahidiinta ee Galcad iyo Masaga waay. »
shafici, on Agoosto 11, 2012 at 1:59 g said:
shabaab ma ahan muijaahidiin lkn adinka ilah ha idiin danbi dhaafpo wayoo waxba makala ogidiin xaqiiqda jiretana waxba galama socotaan aqyaarta marka dhabata ka taliyaaa